Tartanka kubadda cagta dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo dib loo dhigay - Halbeeg News
Tartanka kubadda cagta dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo dib loo dhigay
MUQDISHO (HALBEEG)- Warsaxaafadeed kasoo baxay Xafiiska Wasiirka Dhalinyarada iyo Ciyaaraha ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Marwo Khadiijo Maxamed Diiriye ayaa lagu sheegay in dib loo dhigay Tartanka Kubbada Cagta Dowlad Goboleedyada & Gobolka Banaadir.
Tartanka ciyaaraha maamul goboleedyada oo ah sanadle ayaa waxaa sanadkan soo wajahday xaalad aan kala caddeyn xilliga la qabanayo, iyada oo lagu waday sanadkan in kooxaha tartamaya lagu soo daro koox mataleysa Somaliland.
Wasaarada ayaa warsaxaafadeedkan ay soo saartay ku sheegtay in sababo badan oo is biirsaday darteed dib loogu dhigay qabsoomida tartankan, sababaha ayaa waxaa kamid ah in ay qabsoomin kulamo ay aheyd in ay yeeshaan wasiirka dhalinyarada xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo wasiirrada dhalinyarada iyo ciyaaraha maamul goboleedyada dalka ka dhisan.
Wasaarada dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in tartanka uu qabsoomi doono bisha Abriil ee sanadka soo aaddan ee 2019-ka.
8-dii bisha September ee sanadkan war-murtiyeed ka soo baxay shirka Golaha Iskaashiga Maamul Goboleedyada oo ka qabsoomay magaalada Kismaayo ayaa lagu sheegay in maamul goboleedyada ay xiriirka u jareen dowladda federaalka Soomaaliya ayna hakiyeen dhammaan wada shaqeyntii ka dhexeysay taas oo inta badan aan weli heshiis laga gaarin.
Shirweynaha qaran ee dhalinyarada Soomaaliyeed oo Muqdisho lagu soo gaba gabeeyay